Hello Nepal News » म्यानचेस्टर सिटी भर्सेस पिएसजी : पहिलो हाफमा सिटीलाई अग्रता !
म्यानचेस्टर सिटी भर्सेस पिएसजी : पहिलो हाफमा सिटीलाई अग्रता !
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा अहिले सेमिफाइनल अन्तर्गत दोस्रो लेगको निर्णायक खेलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी र फ्रेन्च क्लब पिएसजीबीच खेल जारी छ । सिटीको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार ठीक १२ः४५ बजेबाट सुरु भएको खेलको पहिलो हाफमा सिटीले १–० को अग्रता लिएको छ ।
घरेलु टोली सिटीका लागि खेलको ११औं मिनेटमा रियाद महारेजले गोल गरेर टिमलाई अग्रता दिलाएका हुन् । सिटीका गोलकिपरबाट बनेको मुभमा सिटीले निकै राम्रो आक्रमण बुन्दै सो गोल गर्न सफल भएको थियो । उनको प्रहारले पिएसजीका गोलकिपर केलर नाभासलाई जिल्ल बनाउँदै बटम कर्नरबाट जाली चुमेको थियो ।
पहिलो हाफको १ गोलसँगै सिटी अहिले समग्रमा ३–१ ले खेलमा अगाडि छ । हालकै स्थितिमा सिटी फाइनल नजिक देखिएको छ । यो नतिजा उल्ट्याउन पिएसजीले दोस्रो हाफमा कम्तीमा ०–३ को नतिजा निकाल्नुपर्छ ।
पहिलो हाफमा सिटीको घरमा पिएसजीले ज्यादा आक्रमण बुने पनि सही दिशामा हान्न सकेन । उसले ४८ मिनेटको खेलमा कूल ८ पटक प्रहार गर्दा एकपटक पनि अट टार्गेट प्रहार गर्न सकेन । जबकि, सिटीले ६ पटक आक्रमण बुन्दा मात्रै दुईपटक अन टार्गेट हान्दै एक सटमा गोल पनि गर्न सफल भयो । पहिलो हाफमा बलमा पिएसजीले बढी पकड पनि जमायो ।
प्रकाशित मिति २१ बैशाख २०७८, मंगलवार १५:२९